औषधीय गुण भएको बहु उपयोगी तुलसी ! के के मा प्रयोग गर्ने ? – Public Health Concern(PHC)
in स्वास्थ्य टिप्स
तुलसीको पात । तस्वीरः जेरनोट काटजेर
तुलसीमा रहेको औषधीय गुण मानव स्वास्थ्यमा बहुउपयोगी मानिन्छ ।
यसै कारण आयुर्वेदमा यसलाई महत्वपूर्ण जडीबुटीको श्रेणीमा राखिएको छ । सामान्य प्रयोगमा गाउँघरमा रुखा–खोकी लाग्दा तुलसीका पात र दाना पकाएर खाने गरिए पनि यसको विविध औषधीय लाभबारे अनभिज्ञ हुने धेरै छन् ।
अध्ययन अनुसार ‘एन्टीअक्सिडेन्ट’ ले मुटुको समस्या, संक्रमण र कतिपय क्यान्सर हुने जोखिम घटाउन पनि सघाउँछ ।
तुलसीको पात, बीउ, हाँगा, जरा आदि सबैजसो भाग औषधीय गुणले भरिपूर्ण मानिन्छन् । आयुर्वेदमा तुलसीको प्रयोगको कैयौं विधि बताइएको छ । तुलसीको पात काँचै चपाएर पनि खान सकिन्छ । पातको चूर्ण बनाई अदुवा, मरिच आदि मिसाई चिया बनाएर पिउँदा फाइदाजनक हुन्छ ।
तस्वीर: उपकार भण्डारी
चिसो लागेमा वा हल्का ज्वरो आउँदा तुलसीको पात, मरिच र मिस्री पानीमा राम्ररी पकाएर बनाइएको काढा पिउँदा फाइदा हुन्छ । यसले चिसोका कारण हुने छातीको दुखाइ र कफ घटाउँछ । तपाईं नियमित तुलसी सेवन गर्नुहुन्छ भने चिसो हत्तपत्त लाग्दैन ।
तातोपानीमा तुलसीलाई मिसाएर खाँदा टाउको दुखाइ, चिसोले नाक बन्द हुने समस्याबाट राहत मिल्छ । अध्ययनले खाली पेटमा नियमित दूधमा तुलसी मिसाएर खाँदा दम र श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी रोगबाट छुटकारा पाउन सकिने समेत देखाएको छ ।
विभिन्न प्रकारका स्त्री रोगमा पनि तुलसी गुणकारी मानिन्छ । तुलसीको पत्ता र बीजको सेवनले मासिक स्रावको अनियमितता दूर गर्ने प्रमाणित भइसकेको छ । पुरुषहरूमा यौन दुर्बलता हटाउन तुलसीको बीजको नियमित सेवन प्रभावकारी हुने आयुर्वेदको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
सुत्ने बेला तुलसीको पाँच ग्राम बीउ तातो दूधसँग पिउँदा शारीरिक कमजोरी हट्छ ।
कपाल झर्नबाट रोक्न पनि तुलसीको पत्ताको धूलो उपयोगी हुन्छ । यसले टाउको चिलाउने समस्या कम गर्छ, शिरको रक्तसंचार बढाउँछ, जसबाट कपालले पर्याप्त पोषण पाउँछ र कपाल झर्न दिंदैन ।
शरीरमा चोट लाग्दा तुलसीको पत्तालाई फिटकिरीसँग मिलाएर लगाउँदा घाउ छिटै निको हुन्छ । किनकि तुलसीमा एन्टी–ब्याक्टेरियल तत्व हुन्छ, जसले घाउ पाक्न दिंदैन । यस बाहेक तुलसीको पातलाई तेलमा मिलाएर लगाउँदा जलन पनि शान्त हुन्छ ।
तुलसीका यिनै बहुआयामिक फाइदाका कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादनमा तुलसीको प्रयोग गर्दै आएका छन् ।श्रोत
Tags: health infohealthy lifestyleHealthy Plantshealthy tipsHome Remediespublic health updateTulasi